Warbixin Xasaasi ah oo laga soo Saaray Xaaladda Soomaaliya – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2015 5:06 b 0
Khamiis, Oktoobar 22, 2015 (Daljir) —Kooxda lagu magacaabo gudiga dabagalka cunaqabataynta saaran dalalka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa war bixin cusub ka soo saartay xaalada Soomaaliya,taasi oo ay kaga hadashay dhinacyo badan sida amniga, burcadbadeedda, dhoofinta dhuxusha, musuq-maasuqa iyo argagaxisada.
Kooxdaan ayaa waxa ay sheegtay baahida loo qabo in la qaado talaabo caalami ah si xal loogu helo caqabadan taagan sida rasbshadaha argagixiso,lana qaado dagaal ka dhan ah masuq-maasuqa,danbiyada dagaal iyo rabshadaha xaga bini-adanimada ah ee dhaca,waxayna hoosta ka xariiqeen in dhamaan arimahaan ay adkeynayaan nolosha aadanaha.
Warbixintan guddiga oo ka koobnayd 400-bog ayaa waxay guddigu ku sheegeen in baar-lamaanka Somalia uu yahay mid ku kala baxa lacag marka ay timaaddo codeyn ama mooshin, iyagoo tilmaantay in baarlamaanka Somalia uu laba garab u qaybsan yahay; kuwaasoo ay ku kala sheegeen kuwo taageersan ururro lagu kala magacaabo Dam Jadiid iyo Aala-Sheekh, iyadoo mar walbana ay guushu raacdo kooxdii lacagta ugu badan bixisa.
Warbixintaan gudiga ayaa sidoo kale looga hadlay dhoofinta dhuxusha iyagoo sheegay in dhoofinta dhuxusha ay hoos u dhacday sannadkan. Waxayna guddug xuseen in hoos-u-dhacan uu yimid kaddib markii Al-shabaab lagaqabsaday Baraawe bishii Oktoobar sannadkii hore.
Warbixinta ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in musuq-maasuq baahsan uu ka jiro bixinta sharciyada ogolaanaya kalluumeysiga, iyadoo la ogaaday baa lagu yiri warbixinta in si qaldan loo siiyo ogolaashaha kalluumeysiga shirkado ajaaniib ah, kuwaasoo intooda badan ka diiwaan-gashan dalka Shiinaha.
Dhanka kalena waxa ay gudigaani warbixintooda ku xuseen in lacagaha laga qaado shirkadaha kalumeysiga ay si kjhalad ah ugu dhacaan xisaabaadyo gaar loo leeyahay oo ka furan dalka Jabuuti, halka ay ku dhici lahayd qasnada dowladda Somalia.
Musuqmaasuq dhanka xisaabaadka ah ayey sheegeen inuu kadhacay safaaradda Somalia ee dalka Kenya xilligii uu maamulayay danjire Maxamed Cali Nuur [Ameerika], iyadoo intii u dhexeysya Jannaayo 2014-kii illaa iyo Abriil 2015-ka, safaaradda waxay soo xereysay 960,836 oo doollar oo laga qaaday 7,500 oo ah Soomaali baasaboorro loo sameeyay, isla waqtigaas waxaa Bangiga Dhexe ee Somalia ku dhacday 486,258 oo doollar, halka 474.578 oo doollar oo kale aan la ogeyn halka ay martay.
Ugu dambayntiina, warbixinta ayaa lagu xusay in 10-casho ka hor intii uusan xafiiska wareejin danjire Ameerika uu keenay aqoon-yahanno dhinaca kambiyuutarrada ah, kuwaasoo tirtiray dhammaan kaydadkii kambiyuutarrada safaarada ku jiray, si aan tix-raacdambe loogu sameyn
Koob loogu Magac Daray Madaxweynihii ugu Horeeyay Puntland oo Garowe ka Socda